Bilaogera Ethiopiana Atnaf Berahane: Tanora, Mahery Fo ary Migadra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2015 12:47 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Deutsch, Türkçe, русский, Français, Swahili, čeština , Español, English
Atnaf Berhane, mpikambana ao amin'ny Zone 9 Bloggers, nogadraina noho ny fibilaogena fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Ethiopia. (sary: fandokoana nomerika avy amin'i Melody Sundberg. Sary nahazoana alalana avy aminy ny famoahana azy)
Tamin'ny Avrily, bilaogera sy mpanao gazety sivy no nosamborina tao Ethiopia. Maro amin'ireo lehilahy sy vehivavy ireo no niasa tao amin'ny Zone9, blaogy iraisana iray izay niresaka sosialy sy politika tao Ethiopia ary nanandratra ny zon'olombelona sy ny fandraisana andraikitry ny governemanta. Ary ny efatra amin'izy ireo dia mpanoratra ato amin'ny Global Voices. Tamin'ny Jolay ry zareo dia voampangan'ny Fanambarana ny Ady amin'ny Fampihorohoroana. Nanomboka hatreo ry zareo dia tao an-tranomaizina hatrany rehetra mihemotra hatrany ny fotoam-pitsarana azy ireo.
Tamin'ny herinandro izahay nanasongadina ny fanombohan-dahatsoratra ao amin'ny andiany – “Manana Anarana Izy Ireo” – izay manasongadina ireo bilaogera tsirairay izay migadra amin'izao fotoana izao. Maniry izahay ny hanome ny mahaolombelona azy ireo, hitantara ny fiainana manavaka manokana sy ara-bolan'izy ireo. Amin'ity herinandro ity ilay mpanoratra Ghaneana, Kofi Yeboah, no manoratra ny tanora indrindra amin'ireo Zone9ers ireo izay antsoina hoe Atnaf Berahane.
Atnaf Berahane, 26 taona, no tanora indrindra amin'ny bilaogeran'ny Zone9. Voasambotra tao Ethiopia izy tamin'ny 25 sy 26 Aprily 2014 niaraka tamin'i Abel Wabela, Befeqadu Hailu, Mahlet Fantahun, Zelalem Kibret, ary Natnael Feleke (izy rehetra ireodia mpikambana ao amin'ny famahanam-bilaogy Zone 9) miaraka amin'ny mpanao gazety Asmamaw Hailegeorgis, Tesfalem Waldyes ary Edom Kassaye.
Ethiopia dia firenena iray izay gejain'ny governemanta ny fahalalaham-pitenenana. Misy ny famehezana henjana ny fampitam-baovao ao amin'ny firenena, indrindra rehefa tonga eo amin'ny firesahana politika sy zon'olombelona izany. Vokatr'izany dia amin'ny alalan'ny Internety no tena amakian'ny olompirenena ny vaovao.
Ny tena ankafizin'i Atnaf amin'ny fanolora-tena mahaolompirenena sy amin'ny fahalianana mampiely vaovao amin'ny olompirenena mba hahatakaran'izy ireo izay lazain'ny lalampanorenana momba ny zon'izy ireo sy ny fahafahana no nahatonga azy niara-nanorina ny Blaogy Zone9 : Ny fankamamiany fatratra ny fikatrohana ho amin'ny zon'olombelona no nandranitra ny fahalianana hiara-manangana izany fikambanana izany. Saingy ny fankamamiany fatratra ny zon'olombelona sy ny fahafahana no nahatonga azy ho voagadra.
Amin'ny fiainana andavanandro i Atnaf dia manampahaizana manokana momba ny teknolojia vaovao (TIC) izay iarahany miasa amin'ny fiadidian'ny tanànan'i Addis Ababa ao amin'ny vaki-paritr'i Bole. Ny trailtrackerblog, izay anavaozan'ny mpanohana hatrany ny vaovao farany momba ny toe-javatra iainan'ny bilaogera, no mamariparitra azy ho tanora Ethiopiana “fantatra amin'ny fampiasany ny Twitter hamoahany ireo fanavaozam-baovao ao an-toerana.” Mamahana ny blaoginy manokana ihany koa i Atnaf ary lalim-pahaizana amin'ny sehatry ny fiarovana nomerika.
Ny zavamisy mampalahelo momba ny hetahetan'ity tanora iray tahaka an'i Atnaf nampanginina ity dia hita mazava ao amin'ity lahatsoratra ity :
Izy ity ve “Repoblika Federalin'i Ethiopia” sa “Repoblikan'i Dystopia” (polisim-panjakana)?
Tafampita any amin'ny Faritra Twilight, Refy Fahadimy (Cinquieme Dimension), ve Ethiopia?…
Azo antsoina tsara ho “Repoblikan'i Dystopia” i Ethiopia ankehitriny. Tanora lahy sy vavy zara raha mahatratra ny faha-20 taonany no samborina sy gadraina noho ny “fampihorohoroana” nefa noho ny fibilaogevana tao amin'ny Facebook sy ny firesahany izay ao an-tsainy any amin'ireo tambajotra sosialy hafa.
Atnaf, sy ireo hafa avy ao amin'ny Zone 9 bloggers, dia mendrika fiderana fa tsy didy figadrana. Tsy ny hoavin'i Atnaf ihany no lasa eny amin'ny fitsarana fa ny an'ireo tanora lahy/vavy misandratra rehetra mahasahy mijoro amin'ny fahalalaham-pitenenana manoloana ny governemanta tia managadra olona.